ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: ဟာသ
အင်တာနက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗဟုသုတရတနာသိုက်ကြီးနှင့်တူ၏။ လိုချင်သောအရာကိုသာ ယူကြပါကုန်။
သင်နှစ်သက်ရာ အရောင် ဖြင့်ရွေးချယ်ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်
candle lay | 1:35 PM | ဟာသ
candle lay | 1:35 PM |
လင်မယား ၂ယောက် ၇န်ဖြစ်နေကြသည်။
လင် = ဈေးဖိုး ထပ်မတောင်းနဲ့ ဟို ၀န်ကြီးကတောင်ပြောတယ် ၂၀၀၀ ၇ှိ၇င် စားလို့လောက်တယ်တဲ့
မိန်းမ = အော် ဒီလိုလား ၇တယ်လေ ဒါဆို ၇ှင်လဲ ဟိုဝန်ကြီး ပြောသလို ထမင်းတနပ်လျော့စားလေ
လင် = ဒီမိန်းမတော့ကွာ ဟိုဝန်ကြီးပြောသလို ပါး၇ိုက်ပီး ပုဆိုးလှန်ပြလိုက်၇မလား
မိန်းမ = အမယ် လုပ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ ဟိုဝန်ကြီးလို ဗိုက်ကြီးလှန်ပြလိုက်မယ် ၇ှင်လုပ်လို့ ကျမမှာ ကလေးတွေတပြွတ်ပြွတ်မွေး၇တာ ဒီမှာကြည့် ဗိုက်ခွဲ၇ာတွေ ၇ှင်ကျတော့ မြက်တပင်တောင် စိုက်ဖူးလို့လား
လင် = ကောင်မ ငါက ပြသနာမတက်ချင်လို့ အလျှော့ပေးနေတာနော် ကန်းတက်လာ၇င်တော့ ဟိုဝန်ကြီးပြောသလိုေ၇ွှလက်ကမ်းလို့မ၇၇င် ဗူးလက် လွှတ်လိုက်မယ်
မိန်းမ= အမလေး ၇ှင့်ကို၇ှင် ဟို၇ှင်၇ုင်မင်းသမီး ယောက်ခမ ၀န်ကြီးများမှတ်နေလား သေခါနီးမှ ဘု၇င်၇ူး အာဏာ၇ူး ၇ူးမနေနဲ့
လင် = ဂန်းနာမ နင်ဟာလေ ဘု၇ားပေါကားနဲ့တက်တဲ့ ၀န်ကြီးလို ငါဂေါင်းပေါ ချီးတက်ပါမဲ့ ဟာမ
မိန်းမ = သေချင်းဆိုး နင်ကျေ၇ွှတိဂုံဘု၇ားကို ကိတ်မုန့်လုပ်စားတဲ့ ၀န်ကြီးလို ငါ့ကို ဦးနှောက်ဖောက်စားမဲ့အကောင်
"ခွပ် ဒုတ် အင့် ဖြောင်းးးး ဒုန်း ဂွမ်းးးးးးး "
credit to original writer Share
Posted by candle lay at 1:35 PM
<!-end of code--> Myanmar Calendar
စာအုပ်များအမှတ်စဉ် (၃) အုပ်ရေ (၅၀၀)
စာအုပ်များအမှတ်စဉ် (၆) အုပ်ရေ (၅၀၀)
စာအုပ်များအမှတ်စဉ် (၄) အုပ်ရေ (၅၀၀)
ဘိုးဘွားရိပ်သာတစ်ခုတွင် တွင်တွေ့ ရသော စာလေးတစ်စောင်ပါ။
အိမ်၌ မပြု-မထားသင့်သော ရှောင်သင့်သော အရာများ
စာအုပ်များအမှတ်စဉ် (၂) အုပ်ရေ (၅၀၀)
ကိုယ့်ဘဝရဲ့ဖူးစာရှင်ကို စောင့်နေချိန်မှာ ပြုလုပ်နိုင်မယ့်အရာ (၆)ချက်
သူငယ်ချင်းတို့ ၏ အားပေးသံများ
FB -Like ခဲ့ပေးပါဦးနော်
ရေဘေးအတွက် ပလန်လိုနေသော မြန်မာများ - ကျွန်တော်တို့မြန်မာများသည် အလုပ်တော်တော်များများတွင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု၊ ကြိုတင်စီမံမှု အလွန်နည်းကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအပါအ၀...
The Light of Darkness - တခါတလေကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနေရာမှာရောက်နေတတ်ကြတယ်ိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုကူညီချင်တယ်။ဒါပေမယ့်သူကကိုယ့် ကိုဒုက္ခပေးမယ့်လူတစ်ယောက်လို့ မြင်တတ်...
"အမေ့ထံသို့ ပေးစာများ-၁၁၄..." - သို့ ချစ်တဲ့အမေ သားသတိရစွာဖြင့် စာရေးလိုက်ပါတယ်။ ရာသီတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေတယ်။ ရာသီဥတုမှမဟုတ်ပါဘူးလေ။ အရာရာတိုင်းဟာ သိသိသာသာပြောင်းလဲတာနဲ့ မသိမသာေ...
Cing Hno (ဇိန်းနှိုး)
ဂဏာမငြိမ်သူ မိန်းကလေး - ငွေတာရီ added 22 new photos. ဂဏာမငြိမ်သူ မိန်းကလေး -------------------- တစ်ခါတုန်းက အတန်းထဲမှာ ဘယ်သူနဲ့မှ မတည့်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်လဲ...
GOlDEN MYANMAR ID GARDEN
- 2014 မှာ စပြီး ဒီ blog လေးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုတွေက ဆက်လက် post အသစ်လေးတွေတင်သွားမှာပါ အားပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Moe Aye's Eain
၂၀၁၂ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ဒင်နာ အမှတ်တရ - တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့မတိုင်ခင်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့မန်နေဂျာကဒင်နာပေးပါတယ်မန်နေဂျုာ မိသားစုရယ်ရုံးကလူတွေရယ်ပေါ့။ညရနာရီမှဆိုတော့ညနေရုံးဆင်းပြီးတရေးအိပ်လိုက်သေးတယ်။ ရ...
မိချောင်းလူသား - ဖလော်ရီဒါမှာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လိုဖြစ်နေတဲ့ မိကျောင်းလူသား ဂျိတ် ဆိုတာလူတွေပြောပြောနေ တာကြာပါပြီ။လူတစ်ပိုင်း မိကျောင်းတစ်ပိုင်းနဲ့၊ပါးစပ်ပြောပြောနေကြတာပေါ...
Myanmar Male Celebrity: Actors and Model Boys
SI THU LWIN ONE MAN SHOW @ NATIONAL THEATER - Si Thu Lwin & Ni Ni Khin Zaw @ Si Thu Lwin Live Show 2014 Si Thu Lwin & Irin Zin Mar Myint @ Si Thu Lwin Live Show 2014 Si Thu Lwin & Tin Zar Maw @ Si Thu L...
Myanmar Model Girl and Supermodel Photos
Miss Global Myanmar 2016, Su Pwint Oo's Fashion - Su Pwint Oo, Miss Global Myanmar 2016 The Face Shop 2013 Top Girl, Su Pwint Oo Myanmar Model Girl: Su Pwint Oo Date of Birth: 5th December Studied at ...
မြစ်တစ်စင်း ချစ်ခြင်းနဲ့စီးဆင်းနေတယ် - မြစ်တစ်စင်း ချစ်ခြင်းနဲ့စီးဆင်းနေတယ် ထူးဆန်းတဲ့ဒီမြစ်ဟာ အစရှိပေမယ့် ဘယ်မှာဆုံးမလဲဆိုတာ မြစ်ဘာသာတောင်မသိဘူးတဲ့လေ မြစ်ဆိုတာ ကွေ့ကောက်တတ်ပေမယ့် ပေးဆပ်ခြင်းရေအ...
မြန်မာစွယ်စုံကျမ်း၊စာပေကျမ်း၊စာတမ်း၊ကျောက်စာစာအုပ်များ - (၁)မြန်မာမင်းအုပ်ချုပ်ပုံစာတမ်းနှင့် ဘိုးတော်ဘုရားကြီး၏ ရာဇသတ်ခေါ်သောအမိန့်တော်တမ်းကြီး (လှသမိန်) http://www.mediafire.com/?jluvwcdtem2neix (၂)ဘန်းစကား (လ...
နေ့လယ်ဘက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အိပ်စက်သူများ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားနိုင် - နေ့လယ်တွင် တစ်နာရီထက်ကြာအောင် တစ်ရေးတစ်မော အိပ်စက်ခြင်းသည် အမျိုးအစား-၂ ဆီးချိုရောဂါအတွက် သတိပေးလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဂျပန်သုတေသီများကပြောသည်။ ၎င်းတို...
Latest Movies Downloader - နောက်ဆုံးထွက်ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုမိမိဖုန်းထဲမှာတင်အလွယ်တကူဒေါင်းယူနိုင်မည့်Lasted Movies Download Apkလေးဟာဖြင့်မိမိဖုန်းထဲမှာတင်အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာDownloadရယူ...
ဆီးဂိမ်းအတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် ထပ်မံ တင်ဒါခေါ်ယူထား - ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဌာန မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အနေနဲ့ ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲ အတွက် လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူဖုိ့ တင်ဒါ...
မျိုးဆက်သစ် ရှင်(၁၀၀)ပြုပွဲ နှိုးဆော်လွှာ။ - နမောတဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ မျိုးဆက်သစ် ရှင်(၁၀၀)ပြုပွဲ နှိုးဆော်လွှာ။ အစီအစဉ်။ ။ ဆရာတော်အရှင်ဇောတိပါလ(လပြည့်ဝန်း) ဦးဆောင်ကာ တပည့် ဒက...
♦ နိဗ္ဗာန်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း အကြောင်း ♦ - [image: Image may contain: 1 person, indoor] ♦ နိဗ္ဗာန်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း အကြောင်း ♦ ******************************** မိလိန္ဒမင်းကြီးက အရှင်နာဂသိန်ကို `အရ...
LEGO City Undercover - PC Game Size - 17 GB Preview SYSTEM REQUIREMENTS MINIMUM: - OS: Windows 7/8/8.1/10 x64 - Processor: Intel Core i5-760 (4 * 2800) or equiv...
တောင်ပိုင်းရှမ်းတပ်နဲ့ ပလောင်တပ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား - တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တပ်မတော်RCSS/SSAတပ်ဖွဲ့ (RCSS - SSA News & Information Department) NCAအပစ်ရပ်တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်တပ်မတော်RCSS/SSA တပ်ဖွဲ့နဲ့ တအာင်းပလေ...
သန့်သူရဦး ( နည်းပညာ )
မကြာမီ ဆိုဒ်ပြန်ဖွင့်ပါတော့မည်။ - အားလုံးကို တစ်ခုကြေငြာချက်ထုတ်ချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အခုဆိုဒ်ကိုပြန်ဖွင့်ပါတော့မယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရရော၊ ကျွန်တော်က...
လာရောက်ကြည့်သောသူငယ်ချင်းများကိုတောင်းပန်းခြင်း - အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီဘလော့လေးကိုဘာမှမလုပ်နိုင်တာတော်တော်ကိုကြာနေပါပြီး မအားတာလဲပါတာပေါ့ အရင်ကကျွန်တော်ကမလေးရှားမှာဆိုတော့အချိန်ကရတယ်လေအခုကမြ...
avast premier92014 full version free download - ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးကိုလာလည်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံး မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ဒီနေ့avast premier92014 full version ဆော့ဝဲလေးတင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဆော့ကို CRACK ...
သမိုင်းစာအုပ်များ - " သမိုင်း စာအုပ်များ " ၁။ မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး - ဦးကုလား http://www.mediafire.com/?u958zlksuy1cvmn ၂။ ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံကျမ်း - နိုင်ပန်းလှ http://w...
~ ပဒုံမာ ~ PLANET ဖိုရမ် ~ ICT Reder ~ Mysteryzillion ~ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် ~ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် ~ Myanmar IT Men ~ MYSTERY ZILLION ~ မြန်မာချက်အွန်လိုင်းဖိုရမ် ~ Myanmartutorials ~ သတ္တမနည်းပညာရပ်ဝန်း ~ ပဒုမ္မာ(လိုင်းဂျလေဘီများ) ~ မြန်မာချက်အွန်လိုင်း ~ မြန်မာအိုင်တီပညာရှင် ~ မြန်မာဂျီးနီးယက် ~ မြန်မာကျောင်းသားများ ~ မြန်မာနက်ဝပ်နည်းပညာ ~ အိုင်တီလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေး ~ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ ~ အဖြူရောင်သံစဉ်မြန်မာဖိုရမ် ~ Mysteryzillionသင်ခန်းစာ
အလွယ်တကူ HTML colour code
အရောင်ရဲ့Code ယူရန် :